IMicrosoft Pix, isivumela ukuba sithathe imifanekiso kunye ne-iPhone phantse ngendlela yobungcali | IPhone iindaba
NjengoGoogle, iMicrosoft ihlasela amaqonga ahlukeneyo eselfowuni anikezela ngenani elikhulu lezicelo, kodwa ngokungafaniyo noGoogle, iMicrosoft kufuneka ijolise kwiivenkile ezimbini ezahlukeneyo, hayi enye injalo kuGoogle. Amakhwenkwe aseRedmond asanda kukhupha Isicelo esitsha sokuthatha imifanekiso engcono nge-iPhone yethu Ngokusebenzisa iMicrosoft Pix yesicelo, usetyenziso olutsha olusandula ukufika kwiVenkile ye App kwaye esivumela ukuba sithathe imifanekiso ngendlela elula, esivumela ukuba sihlengahlengise kamva ukubanjwa kwethu.
IMicrosoft Pix inempawu ezilindelweyo zesicelo esikuvumela ukuba uthathe iifoto kunye neevidiyo, izixhobo zokuhlela, amacebo okucoca ulwelo, ukwabelana ... Nangona kunjalo, esi sicelo sahlukile kwezinye iifoto zokusebenza kuba yenzelwe ukunceda ukususa iifoto ezimbi kushiya ezilungileyo kuphela kwaye oku kugxila kwimiba emithathu: abantu kuqala, ukulungelelanisa useto lwekhamera ukuze babambe umfanekiso kwiimeko ezifanelekileyo kwaye basivumele ukuba senze iividiyo ezincinci xa intshukumo ifunyenwe emfanekisweni.
Iimpawu zeMicrosoft Pix
Useto lweSmart olujonga ngokuzenzekelayo imeko kunye nokukhanyisa phakathi kokudubula.
Ukuqatshelwa kobuso, ukuhlengahlengisa amaxabiso asemgangathweni ukuze umntu / abahle abukeke emhle.
Yenza uqhushumbo olubambe amaxesha angaphambi nasemva kokubanjwa.
Ngalo lonke ixesha sithatha ukubamba, isicelo siya kusibonisa imifanekiso emithathu eyahlukeneyo eneenkangeleko ezahlukeneyo.
Imifanekiso ngokuhamba, esivumela ukuba senze iividiyo zokuzonwabisa ezimnandi emva kokuthatha iifoto.
Ukuhamba kwexesha, okusivumela ukuba sithathe imifanekiso lonke ixesha elithile, senze ividiyo yokugqibela ngayo yonke into ebanjiweyo.
Zonke iifoto kunye neevidiyo zigcinwa ngokuzenzekelayo kuluhlu lwe-iPhone yethu.
Yabelana ngendalo yakho ngaphandle komthungo kunye nabahlobo bakho.
IMicrosoft Pix ixhasa kuphela iiprosesa ezingama-64Oko kukuthi, ukusuka kwi-iPhone 5s ukuya phambili, iPod touch 6th generation, iPad Mini 2 ukuya phambili, iPad Air 1/2 kunye nePad Pro.Ii-iPhone 4s, 5 / 5c, i-iPad 2/3/4, i-iPad Mini kunye ne-iPod touch yesi-5 ayikwazi ukufaka usetyenziso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IMicrosoft Pix, isivumela ukuba sithathe imifanekiso kunye ne-iPhone phantse ngendlela yobungcali
I-Units Plus Converter simahla ixesha elilinganiselweyo